अस्पताल किन सपना देख्छ?
प्रत्येक व्यक्तिको अस्पताल विभिन्न चीजहरूसँग सम्बन्धित छ। कसैको लागि यो आनन्द, रिकभरीको प्रतीक हो र अरू मानिसहरू त्यस्ता संस्थाहरूसँग डराउँछन्। सपनाहरूमा पनि अस्पष्टता छ, जहाँ मुख्य वस्तु अस्पताल थियो। यो सपना भनेको के हो भन्ने बुझ्न को लागी, यो सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्न को लागी सबै विवरणहरू, साथ नै भावनात्मक लोड को लागी देखेको देख्न आवश्यक छ। ड्रीमर्सले पनि वास्तविक घटनामा घटना भएका घटनाहरूसँग प्राप्त जानकारी तुलना गर्न सिफारिस गर्छन्।
सपना, जहाँ तपाई अस्पताल छोड्नु भएको छ, यसले दुश्मन र विद्यमान समस्याहरु संग सामना गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने संकेत दिन्छ। यदि तपाइँ यस्तो संस्था "पहिलो सहायता" मा लगाइएको छ भने, तपाइँ समस्याहरू सुल्झाउन मद्दतमा गिन सक्नुहुन्छ। नाइट दृष्टि, तपाईं अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने, ठूला भौतिक समस्याहरूको घटनालाई चेताउनुहुन्छ, र तपाई आफैले मूर्खमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एक चेतावनी हो कि यो समय आराम गर्न को लागि, किनभने, अन्यथा, सबै कुरा बिरामी मा समाप्त हुन सक्छ। तपाईले अस्पताल प्रवेश गर्नुहुने सपना नजिकको भविष्यमा रोगको शुरुवात बारे एक चेतावनी हो। तपाईं सल्लाहको लागी अर्को कुरा यो हो कि तपाई सतर्क हुनु पर्छ, किनकि दुश्मन सक्रिय कार्यमा लाग्न तयार छ। यदि तपाइँ अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ भने, जीवनमा त्यहाँ एक कठिन अवधि आउनेछ।
अस्पताल र ठूलो घर सपना देखिरहेका छन् भने यसको मतलब जान्न दिलचस्प हुनेछ। यो रात्रि दृष्टिले निष्ठाको भावलाई संकेत गर्दछ। जीवन मा सपनाहरु को एक सपना को अनुसार एक अवधि आएको छ कि मौलिक जीवन को बदलन हुनेछ। यदि तपाइँ अस्पताल र अपरेसन देख्नुहुन्छ - यो एक सिफारिश हुन सक्छ कि तपाई आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सावधान हुनुपर्छ। एक सपना पुस्तक पुस्तकहरु मा त्यहाँ जानकारी छ कि अस्पताल को रात दृष्टि एक सकारात्मक चिन्ह हो र दुश्मनों मा जीत को भविष्यवाणी गर्छन। नाइट सपोर्ट, जसमा तपाईं अस्पतालको गलियारेमा हिँड्नु भयो, एक कठिन परिस्थितिमा तपाईं प्रतीक गर्न सक्नुहुनेछ अरूको सहयोगमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। सपना व्याख्या, अस्पताल कस्तो सपना देख्छ, यसमा फर्श धोएर आवश्यक थियो, व्याख्या, एक अनुकूल प्रतीकको रूपमा। नजिकको भविष्यमा तपाई क्यारियर सीढीमा अग्रिम आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
अस्पतालको चिकित्सकीय विभाग अन्य मानिसहरूलाई समर्थनको कमीको संकेत हो। एक सपनामा तपाईं निराशामा हुनुहुन्छ - यो एक चेतावनी हो कि यदि तपाईं खराब बानीहरूबाट मुक्त हुनुहुन्न भने, तपाईले गम्भीर बीमारीको अपेक्षा गर्नुपर्छ। अस्पतालको निर्माणमा भाग लिनु भनेको यसको मतलब हो कि चाँडै तपाईले आफन्त आफन्तहरु बाट अनपेक्षित उपहार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
मनोवैज्ञानिक अस्पतालको बारेमा कस्तो सपना छ?
यस प्रकृतिको संस्थाले बलियो भावुक तनावको उपस्थिति को प्रतीक गर्दछ, जुन विद्यमान कठिनाइहरूको कारण हुनेछ। त्यहाँ पनि एक सपना छ कि यस्तो सपनाले केहि भित्री अनुभव को उपस्थिति को संकेत गर्दछ। तपाईं लगातार सोच्नु हुन्छ कि कसरि स्थिति संग सामना गर्न को लागी। यदि तपाईं मनोचिकित्सक क्लिनिकमा हुनुहुन्छ भने, यो सफलता र महिमा को हानिकारक हो। यस्तो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ कि काम वा व्यापारमा गम्भीर बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्छ।
अस्पताल र डाक्टरको भ्रमण कस्तो छ?
यदि तपाइँ समान संस्थामा अर्को व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ भने, तपाईंले बुरी खबरहरूको अपेक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो सपना पनि भविष्यमा चेताउनी गर्छ कि भविष्यमा कसैलाई कसैले सोध्नेछ, र तपाईं मनाउन सक्नुहुन्न। नाइट भिजुअल, तपाइँ अस्पतालमा कसैलाई भेट्नुहुन्छ, नजिकको भविष्यमा आफन्तका आफन्त र नजिकका साथीहरूको स्वास्थ्यले संकेत गर्दछ, केही पनि खतरा छैन।
गर्भवती महिलाले अस्पतालको बारेमा किन सपना देखाउछ?
त्यस्तो सपना एक भेदभाव को घटना को बारे मा एक चेतावनी हुन सक्छ। ड्रीमबुकले डाक्टरको भेट्न नछोड्न सिफारिस गर्दछ।
अंतिम संस्कार कस्तो देखिन्छ?
बाँया छाती कस्तो महसुस गर्छ?
किन ककुलहरूको सपना?
पवित्र हप्ता - चिन्हहरू र के गर्ने छैन?
एउटा चिन्ह "सगाईको रङ्ग गुमाउन"
मोतीहरू के जस्तो देखिन्छ?
तपाईं किन फूलहरू गुलाबमा हेर्नुहुन्छ?
साबुन किन सपने?
केक सपनाको के हो?
चीजहरू सङ्कलन गर्ने सपना किन?
तपाईं एप्पल मुक्तिदाता भन्दा पहिले एप्पल किन सक्नुहुन्न?
मृतक पतिले कस्तो सपना देखाउँछन्?
साईन - विन्डोमा एक ढोका
किन पृथ्वीको भित्री सपनाहरु?
बुलङ - परिवारमा काम गर्न, स्कूलमा हानिकारक पहिचान र लडाइँ गर्न के हो?
एरिक हर्सेग र आर्टम पिन्दुरा भेट्टाउँछन्?
उल्टोमा दिन अनलोड गर्दै
ड्रेसिनेट कसरी अर्को बर्तनमा प्रत्यारोपण गर्ने?
कुकुरको बाइट: के गर्ने?
बत्तीहरू काठको बनेको छ
डामर नियमहरूमा क्लासिक्स कसरी खेल्न सकिन्छ?
ओथमन संग सोफा
Hortensia "Pinky Winky"
जेली र चिसोबीच के फरक छ?
केरीका लागि के उपयोगी छ?
एन्जिलिना जोली लन्डन मा बच्चाहरु संग: विनाशित बुकस्टोर र बकिंघम पैलेस को निजी यात्रा
वैनेसा पार्डी एक नयाँ प्रेमीसँग एक मितिमा गए
श्रीलंका वा मालदीव?
एक केटीको लागि बेड-खाट
वेलेरिया - फोटो फिचर 2014
वयस्कों को बुद्धि को पार गरेर ग्रह को 10 साना जीनियसहरु
स्नातक 2015 मा लामो लुगाहरू
रातो कपाल रङ 2014
"घाँस" बाट सुई बुनाई संग बुनाई
मकई केक - नुस्खा
किशोरहरु को आत्मिक व्यवहार
पटाया मा Volkin स्ट्रीट